acid sulfuric Iodide koob ah (CuI); Copper (I) iodide (CuI); Marshite; Copper (I) iodide; Iodocopper (I) biyaha hydrogen sulfide iodine naxaas (ii) sulfate
(đậm đặc, nóng) (kh) (kt)
5 4 4 1 2 4 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 5H2SO4 + 4CuI → 4H2O + H2S + 2I2 + 4CUSO4
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2SO4 (sulfuric acid) waxay la falgashaa CuI (Cuprous iodide (CuI); Copper (I) iodide (CuI); Marshite; Copper (I) iodide; Iodocopper (I))?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo H2S (hydrogen sulfide) iyo I2 (iodine) iyo CuSO4 (copper(ii) sulfate)?
Dhacdada ka dib H2SO4 (sulfuric acid) waxay la falgashaa CuI (Cuprous iodide (CuI); Copper (I) iodide (CuI); Marshite; Copper (I) iodide; Iodocopper (I))
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda CuI (Cuprous iodide (CuI); Copper (I) iodide (CuI); Marshite; Copper (I) iodide; Iodocopper (I)), waa la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 5H2SO4 + 4CuI → 4H2O + H2S + 2I2 + 4CUSO4
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta CuI (Cuprous iodide(CuI); Copper(I) iodide(CuI); Marshite; Copper(I) iodide; Iodocopper(I))
Waa maxay sifada kiimikada iyo jidheed ee CuI (Cuprous iodide(CuI); Copper(I) iodide(CuI); Marshite; Copper(I) iodide; Iodocopper(I))? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CuI (Cuprous iodide (CuI); Copper (I) iodide (CuI); Marshite; Copper (I) iodide; Iodocopper (I)) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jidheed ee H2O (Cuprous iodide(CuI); Copper(I) iodide(CuI); Marshite; Copper(I) iodide; Iodocopper(I))? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O (biyaha) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jidheed ee H2S (Cuprous iodide(CuI); Copper(I) iodide(CuI); Marshite; Copper(I) iodide; Iodocopper(I))? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2S (hydrogen sulfide) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee I2 (Cuprous iodide(CuI); Copper(I) iodide(CuI); Marshite; Copper(I) iodide; Iodocopper(I))? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh I2 (iodine) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee CuSO4 (Cuprous iodide(CuI); Copper(I) iodide(CuI); Marshite; Copper(I) iodide; Iodocopper(I))? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CuSO4 (ii) sulfate ahaan badeecad ahaan?
22H2SO4 + 2Cu2Kharashka2 → Fe2(NA4)3 + 22H2O + 19SO2 + 4CuSO4
acid sulfuric Dioxpper birta disha biyaha baaruud dioxide naxaas (ii) sulfate
22 2 1 22 19 4 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 22H2SO4 + 2Cu2Kharashka2 → Fe2(NA4)3 + 22H2O + 19SO2 + 4CUSO4
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2SO4 (sulfuric acid) ay kula falgasho Cu2FeS2 (Dicopper iron disulfide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Fe2 (SO4) 3 () iyo H2O (biyaha) iyo SO2 (sulfur dioxide) iyo CuSO4 (copper(ii) sulfate)?
Dhacdada ka dib H2SO4 (sulfuric acid) waxay la falgashaa Cu2FeS2 (Dicopper iron disulfide)
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda CU2FES2 (Dicopper iron disulfide), waa la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 22H2SO4 + 2Cu2Kharashka2 → Fe2(NA4)3 + 22H2O + 19SO2 + 4CUSO4
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta Cu2FeS2 (Dicopper iron disulfide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Cu2FeS2 (Dicopper iron disulfide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cu2FeS2 (Dicopper iron disulfide) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Fe2(SO4)3 (Dicopper iron disulfide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Fe2(SO4)3 () badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2O (Dicopper iron disulfide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O (biyaha) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee SO2 (Dicopper iron disulfide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh SO2 (sulfur dioxide) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee CuSO4 (Dicopper iron disulfide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CuSO4 (ii) sulfate ahaan badeecad ahaan?
6FES2 + 40HNO3 + 3Cu2S → 3 Fe2(NA4)3 + 20H2O + 40MAYA + 6CuSO4
Pyrite; Marcsite nitric acid naxaas (i) baaruud biyaha nitrogen monoxide naxaas (ii) sulfate
6 40 3 3 20 40 6 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 6FeS2 + 40HNO3 + 3Cu2S → 3Fe2(NA4)3 + 20H2O + 40MAYA + 6CUSO4
Waa maxay xaaladda falcelinta FeS2 (Pyrite; Marcasite) waxay la falgashaa HNO3 (nitric acid) waxay la falgashaa Cu2S (copper(i) sulfide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Fe2(SO4)3 () iyo H2O (biyaha) iyo NO (nitrogen monoxide) iyo CuSO4 (copper(ii) sulfate)?
Dhacdada ka dib FeS2 (Pyrite; Marcasite) waxay la falgashaa HNO3 (nitric acid) waxay la falgashaa Cu2S (copper(i) sulfide)
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda Cu2S (naxaas (i) baaruud), oo baaba'aya
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 6FeS2 + 40HNO3 + 3Cu2S → 3Fe2(NA4)3 + 20H2O + 40MAYA + 6CUSO4
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Fe2(SO4)3 (copper(i) sulfide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Fe2(SO4)3 () badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2O (copper(i) sulfide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O (biyaha) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee NO (copper(i) sulfide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh MAYA (nitrogen monoxide) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee CuSO4 (copper(i) sulfide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CuSO4 (ii) sulfate ahaan badeecad ahaan?
9Cu + 12H2SO4 + 2Fe (MAYA3)3 → Fe2(NA4)3 + 12H2O + 6MAYA + 9CuSO4
copper acid sulfuric bir (iii) amooniyam biyaha nitrogen monoxide naxaas (ii) sulfate
9 12 2 1 12 6 9 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 9Cu + 12H2SO4 + 2Fe (MAYA3)3 → Fe2(NA4)3 + 12H2O + 6MAYA + 9CUSO4
Waa maxay xaalada falcelinta ee Cu (copper) waxay la falgashaa H2SO4 (sulfuric acid) waxay la falgashaa Fe (NO3) 3 (iron (iii) nitrate)?
Dhacdada ka dib Cu (copper) waxay la falgashaa H2SO4 (sulfuric acid) waxay la falgashaa Fe (NO3) 3 (iron (iii) nitrate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 9Cu + 12H2SO4 + 2Fe (MAYA3)3 → Fe2(NA4)3 + 12H2O + 6MAYA + 9CUSO4
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Fe2(SO4)3 (iron(iii) nitrate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Fe2(SO4)3 () badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2O (iron(iii) nitrate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O (biyaha) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee NO (iron(iii) nitrate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh MAYA (nitrogen monoxide) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee CuSO4 (iron(iii) nitrate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CuSO4 (ii) sulfate ahaan badeecad ahaan?
3Cu + 4H2SO4 + 2KNO3 → 4H2O + 2MAYA + K2SO4 + 3CuSO4
copper acid sulfuric amooniyam haadi biyaha nitrogen monoxide sulfate potassium naxaas (ii) sulfate
3 4 2 4 2 1 3 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 3Cu + 4H2SO4 + 2KNO3 H 4H2O + 2MAYA + K2SO4 + 3CUSO4
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Cu (naxaasta) waxay la falgashaa H2SO4 (sulfuric acid) waxay la falgashaa KNO3 (potassium nitrate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo NO (nitrogen monoxide) iyo K2SO4 (potassium sulfate) iyo CuSO4 (copper(ii) sulfate)?
Dhacdada ka dib Cu (naxaas) waxay la falgashaa H2SO4 (sulfuric acid) waxay la falgashaa KNO3 (potassium nitrate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 3Cu + 4H2SO4 + 2KNO3 H 4H2O + 2MAYA + K2SO4 + 3CUSO4
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee K2SO4 (potassium nitrate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh K2SO4 (potassium sulfate) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee CuSO4 (potassium nitrate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CuSO4 (ii) sulfate ahaan badeecad ahaan?